प्रष्ट पारियोस् भन्दै प्रचण्डलाई बाबुरामले गरे यस्तो प्रश्न | Tapaiko Khabar
प्रष्ट पारियोस् भन्दै प्रचण्डलाई बाबुरामले गरे यस्तो प्रश्न
जनयुद्धप्रति पश्चाताप गर्दै 'मदनपथ' स्वीकारेको हो ?
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : जेठ ३, २०७५ Flash News, मुख्य खबर, राजनीति, समाचार
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन एमालेसँग एकता गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘मदनपथ’ स्वीकार गरेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
ट्विटरमा स्टाटस लेख्दै डा. बाबुरामले पार्टी एकतालाई जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) विरुद्ध जनयुद्ध गरेकोमा पश्चाताप गर्दै प्रचण्डले मदनपथ अंगीकार गरेको स्वीकारोक्ति हो कि होइन प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।
भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन् ‘आजैका दिन एमाले-माके विलयको घोषणाको कुनै संकेतिक अर्थ ? प्रचण्डले जबजको विरूद्धमा जनयुद्ध गरेकोमा पश्चाताप गर्दै ‘मदनपथ’ अंगीकार गरेको स्वीकारोक्ति हो ? प्रष्ट पारियोस् !
यस भन्दा अगाडीचलचित्र ﻿ ‘लुट’ का निर्माता प्रहरीको फन्दामा, कारण यस्तो
यस पछि‘छायाछवि लाइफटाइम लिजेन्ड्री अवार्ड’ बसुन्धारा भुसाललाई दिईने
tapaiko khabar डा. बाबुराम भट्टराई
tapaiko khabar नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक
tapaiko khabar पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
tapaiko khabar माओवादी केन्द्र